OpenShot: Misy ny fananganana isan'andro isan'andro an'ny kinova 2.5.1 | Avy amin'ny Linux
Andro vitsy lasa izay, navotsotra izy ireo fananganana vaovao isan'andro ny mpamoaka horonantsary tsotra sy mahery, antsoina OpenShot, izay ho fanampin'izay, ho an'ny maro dia mora be ny mampiasa rindrambaiko ary mahafehy haingana.
Amin'izao fotoana izao, OpenShot mandeha ho an'ny kinova miorina laharana 2.5.1, izay 7 volana mahery kely taorian'ny famoahana ny besinimaro.
Alohan'ny handehanantsika amin'ny antsipiriany momba ny fiasa ankapobeny sy ankehitriny sy ny fampiasa amin'ny OpenShot, dia tadidintsika fohifohy fa OpenShot, mitanisa ny iray amin'ireo zavatra navoakanay teo aloha mifandraika amin'ny OpenShot, ka raha ilaina dia ireo izay liana indrindra aorian'ity famakiana ity dia mitsidika azy ireo ary mampitombo ny vaovao misy.
"Mpanonta horonantsary maimaimpoana maimaim-poana ary loharano misokatra, sehatra hafa ity editor ity, ka azo ampiasaina amin'ny GNU / Linux, FreeBSD, Windows ary MacOS. OpenShot dia mpamoaka horonantsary izay tena mora ampiasaina ary hahafahantsika manao zavatra maro. Amin'izao fotoana izao ny tonian-dahatsary dia mety amin'ny fanapahana sy fanovana horonantsary haingana sy mora. Ny fampiharana dia mampiasa ny tranomboky FFmpeg ary afaka mamaky sy manoratra ny ankamaroan'ny endrika horonan-tsary sy sary.
1 OpenShot: Mpanonta horonantsary tsotra sy matanjaka
1.1 Fampisehoana ankapobeny sy fampiasa amin'ny OpenShot
1.2 Fiovana vaovao tafiditra ao amin'ny kinova misy ankehitriny
1.3 Misy ny fananganana isan'andro
OpenShot: Mpanonta horonantsary tsotra sy matanjaka
Fampisehoana ankapobeny sy fampiasa amin'ny OpenShot
Amin'ny ankapobeny, ary araka ny tranokala ofisialy avy amin'i OpenShot Mandritra ny fivoarany mandraka ankehitriny dia manana ireto toetra sy fampiasa amin'ny ankapobeny ireto izy:
Izy io dia manana mpanohana sy mpiorina amin'ny Operating Systems mifototra amin'ny Linux, ary ho an'ny Mac OS sy Windows.
Manamora ny asan'ny horonan-tsary haingana sy mora ity.
Izy io dia manana rafitra sary mihetsika mahery vaika, ahafahanao manjavona, mifindra, mamoaka, ary mamelona zavatra ao amin'ny tetikasa horonantsary miasa.
Manolotra lalamby tsy voafetra izy io, ahafahanao manisy sosona betsaka araka izay ilaina amin'ny watermarks, horonan-tsary any ambadika, lalàm-peo, sns.
Izy io dia mampifangaro motera misy vokar-tsarimihetsika mahatalanjona izay mahavita manafoana ny faran'ny horonan-tsary, mamadika loko, manitsy ny famirapiratana, ankoatry ny maro hafa.
Izy io dia mamela ny sary an-tsaina ny fisie audio ho onja, ary afaka mampiseho ny onja aza ho ampahany amin'ilay horonantsary niasa.
Izy io dia manana tonian-dahatsoratra lohateny tsotra sy mahomby, izay manamora ny manampy lohateny amin'ny horonan-tsary, samy mampiasa modely tafiditra ary mamorona anao manokana.
Hahatonga ireo sary mihetsika 3D mahatalanjona amin'ny alàlan'ny fandikana anaram-boninahitra sy sary mihetsika 3D manintona, toy ny lanezy, taratra optika, na lahatsoratra mitsingevana.
Azonao atao ny mamorona fotoana sy miadana ny fihetsika mihetsika amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso tsara ny herin'ny fotoana an-dahatsary. Ho fanampin'izany, mamela anao hampiasa preset na hamelomana ny hafainganam-pandeha sy ny fitodian'ny playback.
Manolotra dingana fanovana horonantsary mahomby izy io, izay ahafahanao misintona sy mandatsaka horonan-tsary, feo na sary avy amin'ny mpitantana rakitra efa taloha mankany amin'ilay fampiharana.
Manolotra fanampiana ho an'ny fiteny maro samihafa (+70) sy ny fahafaha-mandika izany amin'ny hafa amin'ny alàlan'ny fanovana ny kaody misy ao amin'ny LaunchPad.
Raha mila fanazavana fanampiny, azonao atao ny miditra amin'ny tranokala ofisialy ao amin'ny GitHub.
Fiovana vaovao tafiditra ao amin'ny kinova misy ankehitriny
Araka ny filazan'ny mpamorona OpenShot, ity kinova laharana 2.5.1 ity dia:
"Kisary iray misy fampisehoana haingana kokoa, fanatsarana lehibe misy vokany, ary fanohanan'ny toetran'ny UTF-8 tsara kokoa, OpenShot 2.5.1 no dikanteny tsara indrindra, mitondra fanovana horonantsary mahery sy mora amin'ny tontolon'ny loharano misokatra!".
Misy ny fananganana isan'andro
Mba hahazoana ny Fananganana isan'andro (matetika) navoakan'ny mpamorona ny OpenShot, tsy maintsy miditra mivantana amin'ny Fizarana fampidinana ary avy eo tsindrio ny bokotra antsoina «Fananganana isan'andro». Raha vantany vao tafiditra ianao dia afaka misafidy amin'ireo bizina ao amin'ny «tipo .AppImage», alaina via «http o torrent», na fametrahana amin'ny alàlan'ny Repositories PPA.
Amin'izao fotoana izao, ny farany Fananganana isan'andro for AppImage is the OpenShot-v2.5.1-dev2-1602471598-414a2cda-12ddb3df-x86_64.AppImage Navoaka tamin'ny 11 Oktobra amin'ny 2020, raha ireo hita ao amin'ny Repositories PPA ao amin'ny LaunchPad manana andro vitsy kokoa amin'ny famoahana azy eto ambany:
Ankehitriny dia misy ihany misintona, andramo ary ankafizo ny farany natolotry ny OpenShot.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" momba ny tonian-dahatsary horonantsary loharano tsotra sy mahery antsoina hoe «OpenShot», ampiasaina amin'ny sarintany 3D, izany hoe, hamoronana 3D globes sy sarintany 2D ao anaty tranokala tsy misy plugins; dia mahaliana sy mahasoa indrindra, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Ary raha mila fanazavana fanampiny, aza misalasala mitsidika foana ny faritra lehibe anay ho an'ny vaovao mifandraika bebe kokoa sy ny rehetra Tranomboky amin'ny Internet como el OpenLibra y JedIT mamaky boky (PDF) momba an'io lohahevitra io na ny hafa faritra fahalalana. Amin'izao fotoana izao, raha tianao izany «publicación», aza atsahatra ny fizarana azy miaraka amin'ny hafa, ao amin'ny Tranonkala, fantsona, vondrona na vondrom-piarahamonina ankafizina ny tambajotra sosialy, aleo malalaka sy misokatra ho Mastodon, na azo antoka sy tsy miankina toa telegrama.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » OpenShot: Misy ny fananganana isan'andro vaovao an'ny kinova 2.5.1 ankehitriny
Namename67352_a dia hoy izy:
Saingy, inona ny vaovao amin'ny fananganana isan'andro?
Valiny tamin'i Nombrenombrenombre67352_a
Miarahaba, Namename67352_a. Ny vaovao momba ny kinova isan'andro na fanandramana dia tsy hita na aiza na aiza ao amin'ny tranonkala ofisialy. Ny dikan-teny marin-toerana ihany no nofaritana ny vaovaon'izy ireo.
Jami "Together" dia miaraka amin'ny fanatsarana maro ho an'ity rafi-pifandraisana itsinjaram-pahefana ity